Inonaka Keke Yemuraraungu NeGold Drip - Sugar Geek Show - Cake
Homemade muraraungu keke yakagadzirwa nematanda eanonyorova vanilla buttermilk keke uye nyore buttercream chando
Iri keke remuraraungu rinongondiitira kuti ndinzwe kufara zvakanyanya. Ini chaizvo NDINODA kucheka mukati mayo kuti ndione iwo ese akanaka marara mavara! Chikamu chakanakisa ndechekuti, iri keke remuraraungu harisi rekutarisa chete, rinonaka zvinoshamisa chose. Iwe hauzove nemafuta akasara.
Iri keke remurarabungu rakanyanya kukosha kwandiri. Ndanga ndakamirira kuti ndiite kwenguva yakareba. Kubva zvatakaziva kuti taive nepamuviri nemwanakomana wedu, Ezra, ndakaziva kuti ndaida kumuita keke yemuraraungu yake hafu yekuzvarwa (6 mwedzi).
Vanhu vazhinji vanoziva kuti ini nemurume wangu taifanirwa kupfuura nemishonga yakawanda yekushaya mbereko kuti tiwane mudiwa wedu Avalon. Handinyari nazvo. Ini ndinofunga isu tinofanirwa kutaura zvakanyanya nezve kushaya mbereko uye kuti zvakajairika sei. Saka tinonzwa tisiri tega.
Takatanga kurapwa makore maviri apfuura. Hapana chaive chiri kushanda. Muviri wangu wairwa neni. Ini ndakanga ndisiri munzvimbo yakanaka pamoyo kana nepfungwa.
Zvinogona kunzwika kupenga asi ini ndakarota takava nemwanakomana. Handina kuudza munhu asi ndakabatirira patariro nepandaigona napo.
Takatendeka takapotsa tarega kuti taizomboita mwana wechipiri. Asi ini ndaingonzwa mumweya mangu kuti taive nemwana wechipiri akatimirira. Saka hatina kukanda mapfumo pasi.
Mushure mekurapwa kwese uye nemishonga iyi yese, takazopedzisira neIYE chete zai. Kana iwe wapfuura kuburikidza neIVF iwe. ziva kuti mikana yeIYE CHIMWE kutora zai yakanyanya kuderera. Handina kuwana tariro yangu kumusoro.
Asi iro zai rimwe rakanamatira. Uye pano tiri nemwana wedu akanaka mukomana. Muraraungu wedu mushure memhepo. Rombo rakanaka. Kupedzwa kwemhuri yedu.
Ndeipi yekubheka keke yakanakira kune muraraungu keke?
Saka chinhu chekutanga chatinofanira kuita kubika edu marara emuraraungu. Izvi zvinogona kutaridza kutyisidzira asi zviri nyore chaizvo.
Tichashandisa keke rangu randinofarira, velvet chena. Kwete chete. keke iri rinonaka, asi zvakare rakachena chaizvo saka rinotora vara racho zvakanaka.
Kana iwe ukaedza kuwedzera ruvara kukeke revanilla rine mazai emazai mukati maro, iwo maoko anokanganisa mavara ako paanobheka.
peach pie kuzadza uchishandisa mapeche mapeche
Icho chimwe chikonzero chena velvet chena yakakwana yekugadzira muraraungu keke ndeyekuti haizowedzere kupfuura-kusanganiswa iwe paunowedzera iwo ruvara.
Ini ndakawedzera ruvara kune chena velvet kakawanda, ndichigadzira zvese kubva ku pink velvet, green velvet, uye kunyangwe bhuruu velvet. Iko kugadzirwa kunogara kuchishamisa.
Nzira yekugadzira muraraungu keke zvidimbu
Gadzirira yako 8 ″ x2 ″ makeke pani akagadzirira. Unogona kunge usina mapani matanhatu emakeke akaenzana saizi (ini handina) saka chengeta keke rako rinorova mufiriji apo mamwe makeke ari kubheka. Ivo vatete chaizvo saka vanobika nekukasira.
Pfeka pani yako yekeke mune imwe keke goop uye preheat oven yako kusvika 335ºF. Ndakaisawo bepa rematehwe pasi pemapani angu kuitira kuti zvive nyore kutora mupani sezvo vaizoonda.
Kugadzira yedu muraraungu keke zvidimbu, zvese zvaunofanirwa kuita kusanganisa batter yako (tevera iyo kamukira iripazasi) uye wozokamura batter yako mumabhodhoro matanhatu zvakaenzana.
Ndiro imwe neimwe inobata maiza gumi nemashanu ekeke batter. Ini ndaishandisa a chiyero chekicheni kuyera zvangu kuti vagoenzana.
Ndiri kushandisa mavara emagetsi kubva kuAmericolor uye handisi kugadzira muraraungu WEMAHARA, muraraungu uyu wakawedzera Lisa Frank maitiro. Ini ndinonyatsoda aya mavara emagetsi nekuti iwo anoita super inopenya neon mavara uye haufanire kushandisa yakawanda chikafu chikafu.
Iwe unogona kuenda zvachose muraraungu wechinyakare uye shandisa tsvuku panzvimbo yepinki, violet panzvimbo yemagetsi yepepuru uye yehumambo bhuruu pane yemagetsi bhuruu.
Wedzera donhwe kana maviri eruvara kune yega ndiro uye fambisa ne spoon kusvika zvasanganiswa. Ita shuwa yegirinhi iwe unoshandisa yero shoma uye girini diki kuti iro girini riwedzere kugwinya.
yakakosha chena keke recipe kubva pakutanga
Kune orenji, shandisa kaorenji kadiki uye katsvuku kuita kuti orenji iwedzere kupenya.
Kune yepepuru, wedzera padiki pingi nepepuru kuti iyo yepepuru iwedzere kupenya.
Dururira batter yako mumakeke ako emakeke (ini ndakabika matatu panguva uye ndikaisa ma15 ounces ebatter mune yega pani).
Kana vapedza kubheka, vachatanga kudhonza padiki kubva kumucheto kwepani (zvakajairika) ngavatonhorere zvishoma mupani vasati vabuda padura rinotonhorera kuti vatonhorere zvizere.
Ndinoisa makeke angu mufiriji kwemaminetsi makumi matatu kuti ndiasimbise ndisati ndachekesa dome, mativi ebrown, uye pasi pebhuru.
Kucheka makeke ako kunongoita kuti zvidimbu zviwedzere zvakakwana uye zvakanaka kana iwe uchizvimedura.
Maitiro ekushongedza muraraungu keke
Nguva yekushongedza yedu muraraungu keke! Ndiri kushandisa yangu nyore buttercream nekuti inouya pamwechete nekukurumidza. Iwe unogona kushandisa chero buttercream kunyangwe uchida swiss meringue buttercream , Italian meringue buttercream kana kunyange kirimu kirimu chando .
Isa dura rako rekutanga pane rako bhodhi rekeke. Ndiri kushanda pane imwe turntable kuti iyi yose nzira ive nyore.
Isa ruketete rwakatetepa rwe buttercream. Pfura kweinenge 1/4 ″ yechando.
Chengetedza yako spatula yakanaka uye yakati sandara kuitira kuti buttercream yako ive nehukama hwakaenzana.
Ndiri kutanga nepepuru nekuti izvo zvinonzwisisika kwandiri muhuropi hwangu asi unogona kutanga nepingi kana iwe uchida kuenda kunopesana.
Enderera kuchando uye kurongedza nenzira iyi nezvimwe zvakasara uye wozopa iro rese keke jasi rakanaka kuti rivharike mune ese muraraungu mafufu.
Chill keke rako kwemaminetsi gumi nemashanu kuti usimbise iyo yakatenderera buttercream.
Pedzisa keke rako neyekupedzisira dura re buttercream uye riibudise kunze nebhenji rako rinotsvaira uye kubvisa spatula.
Mushure mekutonhodza keke rangu, ndakawedzera zvimisikidzo zvinoyevedza kumucheto wepasi wekeke, ndichibva ndaendesa keke rangu kubhodhi rekeke.
Ndiri kupedzisa keke iri ne mvura ganache inodonha . Ini ndaishandisa eunce e5 ewhite candy melts, 1 ounce yechokoreti candy inonyungudika uye matanhatu maunzi emvura.
Mushure mekunyunguduka, ini ndakawedzera madonhwe mashoma emagetsi yeyero chikafu chekushongedza kuti igadzire goridhe zviwitsi. Ndakadonhedza iyi ganache yemvura mukeke rangu rakatonhora. Wobva wapenda goridhe neimwe mapurasitiki chaiwo anopenga guruva regoridhe uye vodka.
Ita shuwa kuti yako musanganiswa weguruva uye vodka yakaenzana gobvu, sependi kuitira kuti iwe uwane kufukidzwa kwakanaka.
Ipapo ini ndakawedzera tumwe tudiki twemuchena chando pamusoro uye ndokuwedzera mamwe mafafita. Ini ndaishandisa 1M pombi yetipi kuita iyo swirls.
Uye isu tapedza neyedu muraraungu keke! Haitarisike kunge yakanaka! Ini ndinoda maratidziro anotaridzika uye ndiwo matauriro akakwana kumufananidzo wemwedzi uno waEzra.
Iri chete keke remurarabungu rakanaka uye rine mavara, asi zvakare rinonaka rinonaka chaizvo. Yakagadzirwa kubva kune yangu inozivikanwa chena velvet keke recipe uye yakapusa buttercream, ino muraraungu keke inogadzira yakakwana chaiyo chiitiko keke! * noti * kana iwe ukagadzirisa saizi yepani yekeke uchishandisa macalculator, ramba uchifunga kuti mapani anofanirwa kungozadzwa nepakati (1 'kureba) saka matanda haana kunyanya kukura. Calculator inogadzirirwa maviri 'matete akareba. Gadzirira Nguva:makumi maviri mins Nguva Yakabika:makumi maviri mins Nguva Yese:40 mins Makorori:853kcal
Rainbow Keke Zvishandiso
▢24 oz (680 g) upfu hwekeke
▢24 oz (680 g) shuga yakawanda
▢piri Tbsp (piri Tbsp) poda yekubheka
▢10 oz (283 g) mazai machena tembiricha yekamuri
▢6 oz (170 g) mafuta ekubikisa
▢18 oz (510 g) buttermilk tembiricha yekamuri kana kudziya zvishoma
▢12 oz (340 g) ruomba isina sarufa uye yakapfava
▢1 Tapepoon (1 Tapepoon) vanilla yakabudiswa
Nyore Buttercream Frosting Ingredients
▢8 oz (227 g) pasteurized zai vachena
▢32 oz (907 g) hupfu hwehuga
▢32 oz (907 g) unsalted ruomba zvakapfava asi zvisina kunyungudika
▢piri tsp vanilla yakabudiswa
▢1 dot (1 dot) yepepuru chikafu chevara kuita buttercream chena
▢5 oz (142 g) machena machena anonyungudika
▢1 oz (28 g) chokoreti pipi inonyunguduka
▢1 oz (170 g) mvura inopisa
▢1 tsp Chokwadi mapurasitiki anopenga super goridhe guruva
▢1/4 tsp everclear kana vodka kana muto wemononi
▢1M Piping Zano
ONA: ZVINOKOSHA ZVINOKOSHA KUTI tembiricha yemukamuri yese yakanyorwa pamusoro apa tembiricha yemukati uye kuyerwa nehuremu kuitira kuti izvo zvinosanganisa zvisanganise uye zvibatanidze nenzira kwayo Ikoji inopisa kusvika ku335º F / 168º C
Gadzirira mapani ekeke matanhatu (8'x2 ') nekeke goop uye woisa chidimbu chepepa chezasi pasi pepani kuti zvive nyore kubvisa keke
Sunga 8 oz yemafuta uye oiri pamwe chete woisa parutivi.
Sungai akasara buttermilk, mazai machena, uye vanilla pamwe chete, whisk kuputsa mazai uye kuisa parutivi.
Sungai furawa, shuga, poda yekubheka, kubika soda uye munyu mundiro yemusanganisi wemira pamwe neshongedzo yepaddle. Sanganisa masekondi gumi kuti ubatanidze.
Wedzera bhotela rako rakapfaviswa kune zvakasanganiswa zvakaoma uye sanganisa pazasi kusvikira musanganiswa wakafanana nejecha rakakora (anenge masekondi makumi matatu).
Wedzera mumusanganiswa wako wemukaka / mafuta uye rega musanganise kusvikira zvigadzirwa zvakaomeswa zvinyorovesa wozobhururuka kusvika kumedhi (kumisikidza 4 pane yangu KitchenAid) uye rega kusanganisa kwemaminetsi maviri akazara kukudziridza chimiro chekeke. Ukasarega keke rako richisanganiswa padanho iri keke rako rinogona kupunzika.
Nyorura ndiro yako uye wozodzora kumhanya kusvika pasi. Wedzera muzai rako chena / mukaka musanganiswa mumatatu matatu, uchirega batter ichisanganisa kwemasekondi gumi nemashanu pakati pekuwedzera. Svetera pasi mativi zvakare kuti uve nechokwadi chekuti zvese zvabatanidzwa.
Gurai batter yenyu mumabhodhoro matanhatu. Kurera ma15 ounces ebatter kune yega ndiro.
Penda ndiro yega yega nemagetsi emagetsi ekudya. 1/2 tsp yepingi yepingi, 1/4 tsp yero uye 1/4 tsp orenji yearangeji, 1/2 tsp yero yeyero rukoko, 1/4 tsp yero pamwe chete 1/2 tsp girini yegirini yakasvibira, 1/2 tsp yebhuruu yebhuruu layer, 1/4 tsp pingi uye 1/2 tsp yepepuru kune yepepuru rukoko.
Bika zvidimbu zvako kwemaminetsi makumi maviri nemakumi maviri kana makumi mana kana kusvika kumicheto JUST tanga kukweva kure nekeke pani. Usapike-kubheka kana pakati pekeke inodonha.
PASI PEDYO BATA PAN PASIMBA pane pakagadzika kamwe chete kuti ubudise hutsi kubva kukeke. Izvi zvinomisa keke kubva pakudzikira.
Rega makeke atonhorere kwemaminitsi gumi mukati megango usati waburitsa iwo. Iyo keke inodzikira zvishoma uye izvo zvakajairika. Sunungura makeke ako emakeke 30-60 maminetsi usati wagadzika makeke ako. Frost uye zadza ne buttercream frosting.
Mushure mekunge buttercream yako yatsetseka, isa keke kumashure mufiriji kwemaminetsi gumi neshanu usati waisa kudonha kwako.
Mirira drip yako kuti igadzire usati wapenda nependi yegoridhe. Pedzisa keke ne buttercream rosettes uye mamwe anosaswa.
Nyore Buttercream Mirayiridzo
Isa hupfu hwakatsetseka uye pasteurized mazai machena mundiro yesitendi yako musanganisi ne whisk attachment.
Sanganisa pazasi kuti ubatanidze wobva wawedzera kumhanyisa kumusoro.
Wedzera bhotela muzvidimbu zvidiki uchisanganisa. Ramba uchisanganisa kusvikira bota rese rawedzerwa mukati. Wobva wawedzera mune yako vanilla uye munyu.
Sakanidza pakakwirira kusvikira mwenje uye fluffy uye usisiri kunakirwa kunge bhotoro. Wedzera dot rwepepuru chikafu chekushongedza kuti uderedze yero kutaridzika kwe buttercream (sarudzo).
Bvisa chidimbu che whisk wochitsiva nechisungo chepaddle. Sanganisa pazasi kwemaminetsi gumi kuti ubvise mabhuru kubva ku buttercream.
Goridhe Kudonha Mirayiridzo
Sungunusa chokoti mu microwave mu-15-second increments kusvikira inenge yakanyunguduka zvakakwana.
Wedzera mumvura yako inopisa uye microwave mamwe masekondi gumi nemashanu
Kurudzira kusvikira wakatsetseka. Wobva wawedzera mune yako yeruvara rwekudya. Kurudzira kusvikira wakatsetseka.
Isa mvura ganache muhomwe yepiping, bvisa pamuromo uye udonhedze iyo ganache kutenderedza kumucheto kwekeke rako rakatonhora. Mushure mekunge yagadzika, unogona kusanganisa guruva rako regoridhe nevodka pamwe chete wopenda iyo yegoridhe
Iri keke rakanyanya TALL (anenge 7 ') saka zvidimbu zvako zvichave zvakareba. Unogona kuvacheka pakati asi ukazoparadza muraraungu. * noti * kana iwe ukagadzirisa saizi yepani yekeke uchishandisa macalculator, ramba uchifunga kuti mapani anofanirwa kungozadzwa nepakati (1 'kureba) saka matanda haana kunyanya kukura. Calculator inogadzirirwa maviri 'matete akareba. Zvinhu Zvakakosha Kuti Ucherechedze Usati Watanga 1. Uya nezvinhu zvako zvose ku tembiricha yekamuri kana kunyangwe inodziya (mazai, buttermilk, batare, nezvimwewo) kuona kuti batter yako haiputse kana kupwanya. 2. Shandisa chikero ku pima zvigadzirwa zvako (kusanganisira zvinwiwa) kunze kwekunge zvarairwa neimwe nzira (Matipuni, mashupuni, pini nezvimwe). Metric zviyero zviripo mune yekubheka kadhi. Zviyero zvakaunganidzwa zvakanyatsojeka kupfuura kushandisa makapu uye kubatsira kuona budiriro yeresipi yako. 3. Dzidzira Mise en Nzvimbo (zvese zviri munzvimbo yacho). Edza zviyero zvako nguva isati yakwana uye wozvigadzirira usati watanga kusanganisa kuti uderedze mikana yekusiya chimwe chinhu netsaona. 4. Chill makeke ako usati watonhora uye kuzadza. Iwe unogona kuvhara keke yechando uye inotonhorera mune fondant kana uchida. Iri keke zvakare rakanakira kuisira. Ini ndinogara ndichichengeta makeke angu akaomeswa mufiriji ndisati ndasvitswa kuitira nyore kutakura. Dzidza zvakawanda nezve kushongedza yako yekutanga keke. 5. Kana mabikirwo achida zvimwe zvinhu zvakaita seupfu hwekeke, kuchitsiva neupfu hwese hwechinangwa uye chibage chegorosi hazvikurudzirwe kunze kwekunge zvataurwa murutsva kuti zvakanaka. Kuisa zvinongedzo kunogona kukonzera kuti iyi nzira itadze. Hupfu hwese hwehupfu hwakatsetseka hupfu husina maanosimuka. Iine puroteni chikamu che10% -12% Hupfu hwekeke hwakapfava, hwakaderera protein protein ye9% kana pasi.
Keke hupfu masosi: UK - Shipton Mills Keke & Pasiki Hupfu
Kushumira:1kushumira|Makorori:853kcal(43%)|Carbohydrate:92g(31%)|Mapuroteni:7g(14%)|Mafuta:52g(80%)|Mafuta Akaguta:3. 4g(170%)|Cholesterol:115mg(38%)|Sodium:365mg(gumi neshanu%)|Potassium:207mg(6%)|Fiber:1g(4%)|Shuga:70g(78%)|Vhitamini A:1416IU(28%)|Calcium:97mg(10%)|Iron:1mg(6%)
sei haribo gummy bere rakagadzirwa
unogadzira sei keke fondant
Royal icing recipe kirimu yetartar
kufa kwakanyanya nekokoreti keke recipe